Macluumaad nagu saabsan – Talo siin loogu talagalay dadka ay saameeyeen Saxaabiga Hoose
Maadaama aan nahay goobta ay la soo xiriiraan dadka ay saamaynta ka soo gaartay rabshadaha xisbiyada xaqjirka ah, kuwo cunsuriyadda ama rabshadaha naceybka Yuhuudda ee ka dhaca Niedersachsen, waxaan caawinaa dhamaan dadka la kulmay cadaawada noocaa ah dhibanayaal, qaraabo ama markhaati ahaanba. Dadka qaar waxay la kulmaan cadaawad waqti ka mid ah noolashooda. Rabshadaha xisbiyada xaqjirka ah, kuwo cunsuriyadda ama rabshadaha naceybka Yuhuudda waxay yeelan karaan muuqaalo aad u kala geddisan: laga soo bilaabo burbur loo geysto hanti, derbiyada guryaha oo oraahyo iyo swastikas lagu qoro, aflagaado hadal ah, caay iyo qof ku candhuufid, iyo sidoo kale weeraro jir ahaan ah iyo xitaa (isku day) dil. Xadgudubyada iyo weerarada xisbiyada xaqjirka ah, kuwo cunsuriyadda ama rabshadaha naceybka Yuhuudda ma lahan qaab qorshaysan oo lagu og yahay. Intaas waxaa sii dheer, ereyga rabshad kaliya kuma koobna waxyeelooyinka jirka ah. Weerarka luqadeed ama maskaxeed ayaa sidoo kale ah weeraro aan taageero ka siino kuwa ay dhibaatadu soo gaadhay, qaraabada iyo markhaatiyaasha. Waxaan ka caawinaa la qabsiga khibradaha, waxaan ka wehlinaa tillaabooyinka dheeriga ah waxaana kula talinaa istaraatiijiyooyinka fal-celinta ee mustaqbalka.
Ma jiraan sharciyo ku saabsan waxyaabaha ay tahay inay dhacaan si dadka ay dhibaatadu soo gaartay ay noola soo xiriiraan. Sababtoo ah kooxdeena waxay sidoo kale ka caawiyaan ka shaqeynta xaaladaha iyo kala saaridooda.
La talinta Niedersachsen ee loogu talagalay dadka ay dhibaatadu soo gaartay waxaa loo qaybiyaa sadex xafiis goboleed oo ku kala yaala gobolada kala ah Waqooyiga Galbeed, Waqooyiga Bari iyo Koonfurta Niedersachsen, kuwaas oo si wada jir ah talooyin iyo taageero uga bixiya dhamaan gobolka Niedersachsen. Kooxdayadu waa kuwo warwareega waxayna dadka talo doonka ah ku booqan karaan goobtooda. Dhammaan la-taliyayaashu si dhow ayay isugu xiran yihiin si loo xaqiijiyo in la heli karo hadba markii loo baahdo sida ugu macquulsan.
Kooxdayada, baahiyaha dadka talo doonka ah ayaa marwalba mudnaanta koowaad u leh. Waxaan la jirnaa dadka ay dhibaatadu soo gaartay, qaraabada iyo markhaatiyaasha waxaana u istaagan nahay danahooda. Taladeena iyo ficiladeena waxay ku saleysan yihiin heerarka tayada ee Xarumaha Ururada Talobixinta ee Loogu Talagalay Dhibanayaasha Rabshadaha xisbiyada xaqjirka ah, kuwo cunsuriyadda ama rabshadaha naceybka Yuhuudda (VBRG).
Sidaa darteed, kuwa raadinaya talo waxay noola soo xiriiri karaan shaqsi ahaan, taleefan, iimayl iyo, haddii loo baahdo, si qarsoodi ah. La talinta sidoo kale waa suurto gal haddii qofka uusan haysan ogolaanshaha joogitaan oo sax ah. Waxaan u shaqeyneynaa si ka madax bannaan hay’adaha dowladda iyo xisbiyada siyaasadeed. Dhammaan xafiisyada gobollada si ballaadhan iyo qaab dhismeed ahaanba waan uga soocan nahay maamulada iyo hay’adaha dawladda.